अभिमत: सरकारी खर्चमा जंगबहादुरको श्राद्ध
सरकारी खर्चमा जंगबहादुरको श्राद्ध
वीरगन्ज, फाल्गुन १४ -
पत्याउनुहुन्छ ? राणाकालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ जंगबहादुरको श्राद्ध सरकारी खर्चबाटै हुन्छ ! हो, जंगबहादुरको १३३ औं श्राद्ध बिहीबार सिम्रौनगढस्थित रामजानकी मठमा विधिपूर्वक गरियो । जसका लागि वीरगन्जस्थित गुठी संस्थान कार्यालयले ४ हजार २ सय रुपैयाँ उपलब्ध मात्र गराएन, कर्मचारीलाई नै श्राद्धस्थलमा खटायो ।
कार्यालयका निमित्त प्रमुख तथा लेखापाल अम्बिकाप्रसाद जैसवालका अनुसार श्राद्धका लागि बर्सेनि १९ मन धान र १ सय ५० रुपैयाँ खर्च दिँदै आएकोमा यो वर्षदेखि नगद उपलब्ध गराउन थालिएको हो ।
एक पूर्वशासकको श्राद्ध सयौं वर्ष पछिसम्म, त्यो पनि सरकारी खर्चमै, आखिर किन ? जैसवाल भन्छन्, 'केन्द्रीय तहबाट निर्णय नभएसम्म परम्परा जीवित राख्न र खर्च दिन संस्थान बाध्य छ ।' उनले श्राद्धका लागि बिहीबार एक कर्मचारीलाई सिम्रौनगढ खटाइएको पनि बताए ।
१८७३ साल असार ७ गते जन्मेका जंगबहादुरको १९३३ साल फागुन १६ गते फागुन शुक्ल त्रयोदशीका दिन निधन भएको थियो ।
उनी सिम्रौनगढको जंगलमा बर्सेनि सिकार खेल्न आउँथे । त्यहाँ रामको मन्दिर स्थापना गर्ने उनको इच्छा जीवनकालमा अधुरै रहेकाले छोरा जगतजंगले १९४० साल असारमा बाबुको चाहना बमोजिमको मन्दिर बनाइदिएका थिए । त्यसै वर्षदेखि त्यहाँ जंगबहादुरको श्राद्ध गर्ने र भोज खुवाउने चलन रहेको स्थानीय चन्दन मेहता बताउँछन् ।
मन्दिरमा महन्थ, पुजारी, भान्से, टहलु, कोठारी, माली, जलभरिया, परखतिया, चौकिदार र बाजा बजाउनेसमेत गरी १४ कर्मचारीको दरबन्दी छ । उनीहरूलाई संस्थानले तलब र धान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । मन्दिर वरपर जंगलजस्तै बाक्लो बगैंचा छ ।
रानीवास नामले प्रख्यात उक्त मठ परिसरमा कलात्मक तथा ऐतिहासिक वन्स्तु छन् । तीन/तीन क्विन्टलका दुई घण्टा छन् जुन मुलुककै ठूला हुन सक्ने अनुमान छ । जमिनभन्दा पाँच फिट तल रहेको मन्दिरमा आकाशबाट परेको पानी नजमी भित्रभित्रै हराउने स्थानीयवासी बताउँछन् ।
जंगबहादुरको श्राद्ध हल्काफुल्का तरिकाले गर्न थालिएका स्थानीयवासी भने असन्तुष्ट छन् । 'विगतमा श्राद्धलाई ठूलै पर्वका रूपमा मनाइन्थ्यो तर अहिले अत्यन्त गोप्य रूपमा गरिन्छ', स्थानीय शिक्षक तथा सञ्चारकर्मी रामेश्वर मेहताले भने, 'खर्च पर्याप्त देखाइन्छ तर काम सुटुक्क हुन्छ ।'
Posted by हरिप्रसाद पोखरेल at 1:56 PM
Adams Kevin February 20, 2015 at 10:59 AM